ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ AIDS ဆိုသည်မှာ (၁၈)
ဒေါက်တာအောင်စန်း ရေးသားသော “ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသနည်းနှင့် ဆေးဝါးများ” စာအုပ်မှ – AIDS ရောဂါနှင့် AIDS ရောဂါကု ဆေးဝါးများ၏ သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်
ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ AIDS ဆိုသည်မှာ (၁၇)
ဒေါက်တာအောင်စန်း ရေးသားသော “ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသနည်းနှင့် ဆေးဝါးများ” စာအုပ်မှ – Sexual practices and associated risk of HIV transmission. Safar sex:extremely low or no risk practices. Probably saf: Very low-risk practices (small Theorcetical risk)
ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ AIDS ဆိုသည်မှာ (၁၆)
ဒေါက်တာအောင်စန်း ရေးသားသော “ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသနည်းနှင့် ဆေးဝါးများ” စာအုပ်မှ – HIV (+) ဖြစ်နေသူများ အတွက် အကြုံပြုချက်
ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ AIDS ဆိုသည်မှာ (၁၅)
ဒေါက်တာအောင်စန်း ရေးသားသော “ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသနည်းနှင့် ဆေးဝါးများ” စာအုပ်မှ – AIDS ရောဂါနှင့် ပတ်သက်သော အယူအဆအမှားများ။ ရောဂါကို အမြစ်ပြတ် ပျောက်ကင်းစေသော ဆေးဝါးများ မပေါ်သေးသော်လည်း HIV ပိုး ပွားများမှုကို သိသာစွာ ထိန်းချုပ် နှိမ်နင်းနိုင်သော Anti-retrovial drug (ARV) ဆေးဝါးများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး
ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ AIDS ဆိုသည်မှာ (၁၄)
ဒေါက်တာအောင်စန်း ရေးသားသော “ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသနည်းနှင့် ဆေးဝါးများ” စာအုပ်မှ – ထောက်ပံ့ကူညီသည့် အသင်းအဖွဲ့များ။ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း။ EXERCISE။ နှိပ်နယ်ပေးခြင်း။ MASSAGE။ ရယ်မောခြင်း။ LAUGHING။ စွမ်းအင် အခြေခံကုထုံးများ။ အပြုစိတ်။ ဗီတာမင်
ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ AIDS ဆိုသည်မှာ (၁၃)
ဒေါက်တာအောင်စန်း ရေးသားသော “ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသနည်းနှင့် ဆေးဝါးများ” စာအုပ်မှ – တွဲဖက်ကုထုံးများ။ ဘယဆေးပင်ကုထုံး။ တရာထိုင်းခြင်း MEDITATION။ စိတ်နှင့်ကိုယ် ဖြေလျော့နည်းများ RELAXATION။ မိမိကိုယ်ကို ပြောဆိုအကြံပေးခြင်း AUTOSUGGESSION။ စိတ်ကူးထင်မြင်မှု VISUAL IMAGING။ စိတ်ကုထုံးများ။ PSYCHO THERAPY။ တေးဂီတကုထုံး။ MUSIC THERAPY။ အာဟာရကုထုံး။ NUTRITIONAL THERAPY
ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ AIDS ဆိုသည်မှာ (၁၂)
ဒေါက်တာအောင်စန်း ရေးသားသော “ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသနည်းနှင့် ဆေးဝါးများ” စာအုပ်မှ – ARV ဆေးဝါးများ အသုံးပြုရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ARV ဆေးဝါးများဖြင့် ကုသပုံ
ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ AIDS ဆိုသည်မှာ (၁၁)
ဒေါက်တာအောင်စန်း ရေးသားသော “ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသနည်းနှင့် ဆေးဝါးများ” စာအုပ်မှ – AIDS ရောဂါ ကုသနည်းများ ။ AIDS ဆေးဝါးများကို စတင် စားသုံးသင့်သူများ
ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ AIDS ဆိုသည်မှာ (၈)
ဒေါက်တာအောင်စန်း ရေးသားသော “ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသနည်းနှင့် ဆေးဝါးများ” စာအုပ်မှ – HIV(+) အဆင့်မှ AIDS အဆင့်သို့ လျင်မြန်စွာ ရောက်ရှိစေသည့် အကြောင်းရင်းများ။ HIV(+) အဆင့်မှ AIDS အဆင့်သို့ လျင်မြန်စွာ မရောက်ရှိအောင် ကာကွယ်နိုင်သည့် အကြောင်းရင်းများ
ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ AIDS ဆိုသည်မှာ (၇)
ဒေါက်တာအောင်စန်း ရေးသားသော “ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသနည်းနှင့် ဆေးဝါးများ” စာအုပ်မှ – ရောဂါတိုးတက်မှုနှုန်းကို ခန့်မှန်းခြင်း။ လူ့သက်တမ်းကို ခန့်မှန်းခြင်း
ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ AIDS ဆိုသည်မှာ (၆)
ဒေါက်တာအောင်စန်း ရေးသားသော “ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသနည်းနှင့် ဆေးဝါးများ” စာအုပ်မှ – HIV ရောဂါအဆင့်ဆင့်များ။ AIDS ရောဂါတိုးတက်မှုနှုန်း အမျိုးအစားများ။
ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ AIDS ဆိုသည်မှာ (၁၀)
ဒေါက်တာအောင်စန်း ရေးသားသော “ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသနည်းနှင့် ဆေးဝါးများ” စာအုပ်မှ – ကျွန်ဒုံးကို စနစ်တကျ အသုံးပြုနည်း။ ကွန်ဒုံးကွဲရသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းများ။ လိင်ဆက်ဆံမှုမှ ရောဂါမကူးစက်စေရန်။ သွေးသွင်းခြင်းမှ ရောဂါမကူးစက်အောင် ကာကွယ်နည်းများ။ ဆေးထိုးအပ်မှ တစ်ဆင့် ရောဂါမကူးစက်အောင် ကာကွယ်နည်းများ။